The Kpop Times - IDOL အများစု ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသော အခက်အခဲများ
1. Sasaeng fans ( အစွန်းရောက် ဖန်)
ပြောရမယ်ဆိုရင် မပါမဖြစ်ကတော့ Sasaeng Fan တွေပါ သူတို့ရဲ့အားပေးမူ့ ချစ်ခင်မှုကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက idol တွေကိုအမှန်တကယ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ တစ်ခါတလေ အသက်အန္တရာယ်တောင် ဆိုးရိမ်ရပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းက သူတို့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ထူးဆန်တဲ့ အပြုအမူတွေ ထူးဆန်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေ လုပ်ပြီး IDOL တွေဆီက အာရုံစိုက်မှုကို ရဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလုပ်ရပ်တွေ စည်းကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့ ပြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အထိ ကြမ်းတမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး အစွန်းရောက်ပရိသတ်တွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ အထဲမှာ JYJ အဖွဲ့ဝင် Jaejoong လည်းပါဝင်ပါတယ်။ ချွေးထုတ်ခန်းမှာ အနားယူနေစဉ် ပရိသတ်တစ်ဉီးကအိပ်နေတဲ့ Jaejoong ရဲ့ပုံကိုရိုက်၍ အွန်လိုင်းပေါ်မှာပါတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါထက်ပိုဆိုးတာက JaeJong က သူ့ကိုအတင်းနမ်းခဲ့ပါတယ်ဟုတောင် စွပ်စွဲလိုက်ခြင်းပါ။
အစွန်းရောက်ပရိသတ်တွေကြောင့် မတော်တဆမှုတွေအများကြီး ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာက Super Junior အဖွဲ့ဝင် Heechul ဟာ ခြေထောက်ကျိုးတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ HeeChul ကားမောင်းနေစဉ်သူရဲ့အနောက်ကို အစွန်းရောက်ပရိသတ်တွေ လိုက်လာတာကို အမျိုးမျိုး ပထုတ်ရင်း နောက်ဆုံးမှာတော့ ကားအက်စီဒန့်ဖြစ်တဲ့ အထိပါပဲ။
2. Extreme dieting ( ပြင်းထန်တဲ့ ဝိတ်လျှော့ခြင်းတွေ)
K Pop အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာရှိတဲ့ လူအများစုဟာဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ပတ်သက်လာရင် တော်တော်လေး အယူသည်းကြပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်တဲ့ အထိ ပြင်းထန်တဲ့ဝိတ်ချခြင်းတွေကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြပါတယ်။
TWICE အဖွဲ့ဝင် MoMo ဟာ သူပြုလုပ်ခဲ့သော ဝိတ်ချခြင်းနည်းလမ်းကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သူ လေ့ကျင့်သူဖြစ်စဉ်ကာလတုန်းက တစ်နေ့လုံးနေမှ ရေခဲတုံးတစ်တုံးသာစား၍ နေခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးပြင်းထန်းတဲ့ diet တွေလုပ်ပြီး တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာတော့ သူမကိုယ်တိုင်က အိပ်ရမှာတောင် ကြောက်လာတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူသာ အခုချိန်အိပ်လိုက်ရင် နောက်နေ့ပြန်မနိုးလာမှာကို ကြောက်လန့်နေခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
3. Malicious netizens ( အဆိုးမြင်မှတ်ချက်ပေးသူ)
နောက်ထပ်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ...အကုန်လုံးတွေထဲကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလို့ ထင်မိပါတယ်။ Malicious Netizens တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့တွေက မိမိသဘောမကျတဲ့ IDOL တွေကိုဆိုရင် အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ အပြစ်ပြောနေကြတဲ့ စိတ်သဘောထားသေးသိမ်တဲ့ သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Lisa ကို ထိုင်းလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် အပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ် သာမန်ထိုင်းမလေးတစ်ယောက်က ကိုရီးယားမိတ်ကပ်နဲ့ လှပနေတယ် ဆိုပြီး Lisa ကိုမှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ လူမျိုးမတူလို့၊ ရည်းစားထားလို့၊ ရုပ်ရည်မလှလို့ အစရှိတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ပြစ်တင်ပြောဆိုကြတယ်။
Kang Daniel နဲ့ Twice အဖွဲ့ဝင် Jihyo တို့ တွဲနေကြပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Kang Daniel ရဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ ...ပွဲဉီးထွက်တာဖြင့်မကြာသေးဘူး ရည်းစားထားရမလာဆိုပြီး ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေထက် အဓိကအကြောင်းပြချက်က Idol တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှု တစ်ခုပျက်စီးသွားတာကြောင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တောင်အပြည့်အဝသဘောမကျရသေးခင်ပဲ ရည်းစားထားရမလားဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတွေကြောင့် မုန်းတီးခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ခု ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာက ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုးမှတ်ချက်တွေကြောင့် Idol အချို့ဟာဆိုရင် ပလတ်စတစ် ဆာဂျရီလုပ်ရတဲ့အထိကိုရှိကြပါတယ်။ Soyou သည် အရင်တုန်းက သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေရရှိခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပလတ်စတစ် ဆာဂျရီ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
4. Overworking ( နားချိန်မရှိ အလုပ်လုပ်ခြင်း)
သေချာတာတစ်ခုကတော့ Idol တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ တစ်ရက်မနက်ထဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး အနှစ်နှစ်အလလ ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်သာ ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ကံမကောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင် အနှစ်နှစ်အလလ ကြိုးစားတာတောင်မှ မအောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ် ။ များပြားလှတဲ့ အချိန်ဇယားတွေကြောင့် ကောင်းကောင်းနားချိန်မရပဲ နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ အထိပါပဲ။ West Coast Festival Concert မှာဖျော်ဖြေနေရင်း အဆိုတော် Kim Jang Hoon ဟာ စင်ပေါ်မှာတင်မူးလဲလို့ ဆေးရုံတင်ရတဲ့ အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သတိရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ အချိန်ဇယားတွေအကုန်ဖျက်သိမ်းပြီး အနားယူခဲ့ရပါတယ် ။
5. အေဂျင်စီတွေက သစ္စာဖောက်လိုက်ခြင်း
K Pop အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ပြဿနာတစ်ခု ကတော့ အေဂျင်စီတွေကနေ Idol တွေကို ရက်ရက်စက်စက် မညှာမတာ ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုးအပြုအမှုတွေကြောင့် ဘဝပျက်ရတဲ့ Idol တွေဟာအများကြီးပါ။
Gugudan အဖွဲ့ဝင် Sally ရဲ့ပြောပုံအရ သူ့ရဲ့ အေဂျင်စီဟာဆိုရင် အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကို သူတို့နေနေတဲ့ အဆောင်ကနေထွက်သွားစေခဲ့ပြီး ဘယ်တော့မှပြန်မလာဖို့ အပြောခံခဲ့ရဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။